Blackjack 🥇 Pinda uye unakirwe kubva Blackjack-online.app
Blackjack mutambo unotambwa nemakadhi mumakasino uye unogona kutambidzwa ne1 kusvika 8 maseketi emakadhi makumi mashanu nemaviri, uko chinangwa chiri kuve nemapoinzi akawanda kupfuura anopikisa, asi usingapfuure makumi maviri nerimwe (kana ukarasikirwa). Mutengesi anogona kungorova kusvika pamakumi mashanu emakadhi kana anosvika gumi nemanomwe.
Blackjack: sei kutamba nhanho nhanho? 🙂
Kuti utambe Blackjack pamhepo mahara, iwe unofanirwa tevera iyi rairo nhanho nhanho:
2 danho. Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watove kuratidzwa pachiratidziri. Unofanira chete rova kutamba uye iwe unogona kutanga kutamba.
3 nhanho. Heano mamwe mabhatani anobatsira. Unogona "Wedzera kana bvisa ruzha", Ipa bhatani"tamba"Uye tanga kutamba, unogona"Mira zvishoma"uye"Kutangazve"chero nguva.
4 nhanho. Svika padhuze nepese paunogona kusvika 21.
5 nhanho. Mushure mekupedza mutambo, tinya "Tangazve" kutanga patsva.
Chii chinonzi blackjack?🖤
Blackjack ndeimwe yemitambo yemakadhi inozivikanwa kwazvo pasirese. Mutambo ndewe yakapusa, intuitive uye chero munhu anogona kuiridza. Blackjack inogona kutambwa nenhamba dzinoverengeka kubva pa1 kusvika ku8, iine makadhi makumi mashanu nemaviri. Mukuwedzera, pane sarudzo yekutamba blackjack online.
Chinangwa chemutambo chiri nyore: uwane zvibodzwa zvepamusoro soro, usingapfuure makumi maviri neshanu poindi. Kuti aite ichi chinangwa, mutambi anotanga kugamuchira makadhi maviri, asi anogona kukumbira zvimwe panguva yemutambo.
Chikamu chepamusoro chinokwanisika chinonzi Blackjack, ndosaka mutambo uine zita iri rinonakidza.
Nhoroondo ye blackjack
Blackjack, sezvatinoziva, yakashanduka kubva mumitambo yakasiyana yezana ramakore rechiXNUMX iyo yakatambidzwa muEurope. Mazhinji emitambo iyi aive nechinhu chimwe chakafanana: chinangwa chaive chekusvika ku21.
Kutaurwa kwekutanga kumitambo iyi kwakaitwa mukati 1601 uye aripo mubasa raMiguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo. Iyi nhoroondo inotaurira hupenyu uye kuzvidemba kwevaSevillian mapfumo epaGolden Age, avo vane hunyanzvi pakutamba mutambo unonzi "Ventiuno".
Iyo french vhezheni Mutambo 21 wakasiyana zvishoma, sekuti mutengesi anogona kupeta mabheti uye vatambi vachitamba mushure mega kutenderera.
Uyezve, iyo vhezheni vhezheni, iyo ine zita rechinomwe nehafu, inobvuma kuti mutambo uridzwe nemakadhi echiso, pamwe nenhamba 7, 8 na 9. Mutambo wacho wakasiyana mushanduro yeItaly nekuti, sekureva kwezita, chinangwa yaifanira kusvika mapoinzi manomwe nehafu. Zviripachena, kana ivo vatambi vakayambuka manomwe nehafu mucherechedzo, ivo vanokundwa.
A America yakauya mushure meFrance Revolution, uye pakutanga kwaisave kwakakurumbira mumakomba ekubhejera. Kukwezva vatambi kumutambo uyu, varidzi vakapa akasiyana mabhonasi. Sarudzo dzakakurumbira dzaisanganisira gumi-kusvika-10 kubhadharisa system, kune ruoko neacce yemaspade uye blackjack. Ruoko irworwo rwakazonzi Blackjack, ichipa mutambo zita rawo.
Blackjack mutambo une zvakawanda zvinochinja mukati memakasino pachawo. Pano isu tinopa iyo inonyanya kushandiswa misiyano:
Iko kusiana kwakanyatso kufanana neicho chepakutanga, chinotambirwa zvakajairika ne 6 kusvika ku8 madheki emakadhi makumi mana nemasere.
Zvisinei, pano Izvo zvinokwanisika kupeta chero nhamba yemakadhi, sekukwanisika kurova rimwezve kadhi mushure mekubvisa maac.
MuSpanish 21, mutambi weBlackjack anogara achirova mutengesi.
Multi Ruoko Blackjack
Multi-ruoko Blackjack inoridzwa nenzira imwecheteyo seyakajairwa Blackjack uye inowanzo kuoneka mumakasino epamhepo sezvo ichibvumira mutambi kuve anosvika mashanu maoko akasiyana panguva yemutambo mumwe chete.
Iyi misiyano inoridzwa nemadheki mashanu panguva imwe chete.
Iyi vhezheni inotambwa nayo Makadhi makumi mashanu nemaviri uye iwe unogona kugara uchikumbira kupeta mutambo wako pa52 kana Ace. Nekudaro, mune iyi vhezheni kana mutengesi aine Blackjack, anorasikirwa nekubheja kwake kwese.
Blackjack Chinja inokupa iwe mamwe mafambiro ayo anowanzo kuverengerwa sekubiridzira mune yakajairwa kadhi mutambo.
Nekudaro, uku kusiana inoitwa ine matanhatu kusvika masere madheki, vatambi vanogara vaine maoko maviri akasiyana, makadhi anotariswa akatarisana uye vatambi vanogona kuchinjana makadhi emaoko.
Iyo Vegas Strip ndeimwe mutsauko weBlackjack uye inotambidzwa nemana madheki emakadhi makumi mashanu nemaviri. Pano mutengesi anosungirwa kumira chero huwandu hwemakadhi ake huri gumi nemanomwe.
Zvakare, mutambi anogona kubvisa makadhi maviri ekutanga uye kudzorerazve maoko ake.
Iye zvino tava kuziva kuti blackjack chii uye hwaro hwayo, asi usati watamba blackjack mune imwe nyika yakavakirwa kana online kasino, unofanira kudzidza nekugona iyo blackjack inotonga. Izvi zvinokutendera kuti unzwe kugadzikana panguva yako yekutanga ruzivo rwekutamba uye kuti mutambo ubude nekukurumidza kune vese vatambi vari patafura yako.
BlackJack mutambo wezano, unotambirwa patafura yakabatana apo vatambi vakati wandei vanogona kutamba, asi yega yega inoenderana nezano ravo uye inotamba zvakasiyana vachipesana neMutengesi.
Chinangwa chemutambi wega wega kuita makumi maviri nesere kana kutora ruoko rwavo padhuze kusvika makumi maviri nesere.Mutambi kana mutengesi anoita BlackJack kana makadhi avo maviri ekutanga ari Ace ne21 (Ace + 21 kadhi, kana kadhi reAce plus).
Tanga kutamba 🖤
Iyo nhemaJack Inowanzo ridzwa nematanho matanhatu emakadhi panguva imwe chete ayo akavharidzirwa pakati pemutambo wega wega.
In the first round makadhi akaitirwa vatambi anotariswa akatarisana, kunze kwekadhi rekutanga remutengesi iro rinotariswa rakatarisana pasi.
Kana kadhi rekutamba repiri raitwa, makadhi ese anotariswa akatarisana uye ndiko kukosha kwekadhi remutengesi izvo zvinokanganisa zvese zvisarudzo zvichaitwa nevatambi maererano nemutambo.
Iko kukosha kwemakadhi emutengesi kunofanira kugara kuri pamusoro pe17Mune mamwe mazwi, kana makadhi maviri ekutanga emutengesi aine kukosha kwakaderera pane gumi neshanu, anofanira kutora makadhi akawanda kudzamara asvika padiki pane gumi nemanomwe uye makumi maviri nenomwe.
Kana mutengesi akaita zvinopfuura makumi maviri nesere, anoongorora, uye vatambi vese vanokunda. Kana zvikaitika kuti mutengesi akaisa kukosha pakati pegumi neshanu nemakumi maviri nepfumbamwe, vatambi vane mutengo wakakwirira vanokunda, vanosunga vatambi nemutengo wakaenzana uye vatambi vane kukosha kwakaderera pane mutengesi vanorasikirwa nemabheti avo.
BlakJack inobhadhara 2 kusvika 1, asi kana mutambi akaita BlackJack vanokunda 3 kusvika 2. Kana Mutengesi BlackJacks, anokunda maoko ese patafura, kunyangwe avo vane kukosha kwe 21. Kana mutambi uye Mutengesi BlackJack, inoonekwa seyeti uye hapana kubhadhara.
Kazhinji, iwe unowana ruzivo pane yega tafura yejackjack inoratidza hushoma uye hwakanyanya mabheji ekubheja etafura iyoyo. Kana muganho wetafura uchiratidza € 2 - € 100, izvi zvinoreva kuti kubheja kushoma kuri € 2 uye kubheja kukuru kuri € 100.
Blackjack kadhi kukosha
Kadhi rega rega rakaverengwa kubva pa2 kusvika pa10 rine kukosha kwaro kumeso (rakaenzana nenhamba yekadhi).
MaJacks, maqueen nemadzimambo (manhamba) akakosha gumi mapoinzi.
Iyo Ace yakakosha poindi imwe kana gumi nematanhatu, pasarudzo yemutambi zvichienderana neruoko rwake uye kukosha kwakamunakira. Kana uchitamba BlackJack pamhepo, software yacho inotora kukosha kweiyo Ace iyo inonyanya kubatsira mutambi.
Zvisinei nekusiyana kwemutambo uyu, mhando dzekufamba dzakafanana kune vese.
heyi Mhando 5 akasiyana mafambiro.
Mira (mira) Seizvo zita rinoratidzira, mutambi anogutsikana neruoko rwake uye haadi kugashira mamwe makadhi.
Rova: inoitika kana mutambi achida kugamuchira imwe kadhi.
Kaviri: Kana mutambi achinzwa kuti anongoda imwe yekuwedzera kadhi (rimwe chete), anogona kukumbira kubheja kwake kuti kuwedzere uye agamuchire kadhi rimwezve. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyi sarudzo inogona kupihwa chete pamakadhi maviri ekutanga aunogashira.
Govanisa: Kana makadhi maviri ekutanga akagamuchirwa nemutambi aine kukosha kwakaringana kwepfungwa, anogona kusarudza kuapatsanura kuita maviri maoko akasiyana. Mune ino kesi, kadhi rega rega richava rekutanga kadhi reruoko rutsva. Uyezve, zvakafanira zvakare kuisa kubheja nyowani (yakaenzana nemutengo kune yekutanga) iyi ruoko nyowani.
Siyana nazvo: Kune mamwe makasino anotendera mutambi kupeta mushure mekugamuchira maviri ekutanga makadhi. Nekudaro, mune ino kesi iwe unogara uchirasikirwa ne50% yemari yawakatanga kubheja.